မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး/ CEC နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၃)
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ CEC နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၂)
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၁)
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး(၃) နိုင်စိုးမြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ ကောင်စီတွင် မွန်ပါတီက တစ်ဦး ပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မွန်သံဃာတော်တစ်ပါး၏ သဘောထားအမြင်
ကိုဗစ် ကူးစက်မှု မြင့်တက်ချိန် ပါတီများ မဲဆွယ်ရေး အခက်ကြုံ
မွန်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို ကိုဗစ်ကြောင့် လူဦးရေ ကန့်သတ် ကျင်းပ
မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ စာဖတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အသံ ပြည်သူ့ထံ ပဲ့တင် ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သလား
ကယားပြည်နယ်တွင် တောင်သူ ၁၉ ဦးကို တပ်မတော်က အကြိမ်ကြိမ်တရားစွဲ
မွန်ပြည်သစ်နှင့် KNU ဆွေးနွေးပွဲ ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တွေရခဲ့လဲ
ဆောင်းပါး January 21, 2021
Thursday, January 21, 2021 By ရိုးဂုဏ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) က ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုတွေကို...
Feature November 30, 2020
Hi Burma Honesty Information 16/11/2020 ခင်ဘုန်းမို့ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေကို လာမယ့်အစိုးရသက်တမ်းရောက်ရင် ပိုမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေမှာ...
ဆောင်းပါး November 30, 2020
Hi Burma Honesty Information 28/11/2020 ရှင်ငြိမ်း ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ထွက်လာတဲ့မဲရလဒ်တွေအရ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဟာ ပြည်နယ်အခြေစိုက်နိုင်ငံရေး ပါတီတွေထဲမှာ...
Fact Check : UEC ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသား သတင်းမှားအပေါ် အခြေခံတဲ့ ထပ်ဆင့်သတင်းမှား ဆက်လက် ဖြန့်ဝေနေ ပြန့်ပွားနေ
“ဒေသခံတွေ သွားလျှောက်ရင် မရဘူး လျှောက်လွှာလည်း မပေးဘူး ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုတာ နည်းလမ်းတွေလည်း မပြောဘူး အဲဒီတော့ ငွေရှင် ဓနရှင်...
မော်လမြိုင်ဘိုးဘိုး October 11, 2018
မော်လမြိုင် ဘိုးဘိုး၊ ရေကြီးမှုနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ဂယက်
မော်လမြိုင်ဘိုးဘိုး August 1, 2018
ရေကြီးမှုတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေတာကို မော်လမြိုင် ဘိုးဘိုး ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းထားပါတယ်။ ရေကြီးမှု နောက်ကွယ်က ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း အထက်တင်ပြဖို့ ဘိုးဘိုးကလိုက်လံ မေးမြန်းထားပါသေးတယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကတော့ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှုစားကြပါခင်ဗျား။ အပျင်းလည်းပြေစေ၊ သတင်းလည်းသိစေမယ့် "မော်လမြိုင် ဘိုးဘိုးနှင့် သတင်းထောက်မောင်ဖိုးသိ"ရုပ်သံ အစီအစဉ်များကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုင်း...
မော်လမြိုင်ဘိုးဘိုး July 27, 2018
နှာခေါင်းကအစပြသာဒ်မီးလောင်ဆိုသလိုမျိုး ခက်ခဲနက်နဲ တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုကို မော်လမြိုင်ဘိုးဘိုး ကိုင်တွယ်ရင်း သိသာထင်ရှားစေလိုက်ပါပြီ။ အပျင်းလည်းပြေစေ၊ သတင်းလည်းသိစေမယ့် "မော်လမြိုင် ဘိုးဘိုးနှင့် သတင်းထောက်မောင်ဖိုးသိ"ရုပ်သံ အစီအစဉ်များကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုင်း တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ မိုးရာသီအထူးအစီအစဉ်အဖြစ် နှုန်းထားတွေလျော့ဈေးပေးထားတဲ့ “မော်လမြိုင်ဘိုးဘိုးနှင့် သတင်း ထောက်မောင်ဖိုးသိ”အစီအစဉ်မှာ ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းလိုပါက ဖုန်း - 09788882546,...
Interviews March 21, 2021
အပိုင်း ၂ မှ အဆက် နိုင်ရဲဇော် - ဒီ ကောင်စီရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း တစ်ခုလုံးဟာ ပါတီတစ်ခုလုံး ပြန် ရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်။ ကောင်းခြင်း...
Interviews March 20, 2021
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး/ CEC နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၂) မေး - (နစက)နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ကိစ္စမှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအပေါ် အတော်...
Interviews March 19, 2021
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီ လေ့ကျင့်ရေးဌာနမှူး နိုင်ရဲဇော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း (၁) မေး - မတ်လ ၁၅ ရက်က သံဖြူဇရပ်မှာ...
Health News May 18, 2020
ရန်ကုန်၁၈ မေ ၂၀၂၀ ၊ ဟင်္သာမီဒီယာ
Health News May 9, 2020
၂၀၂၀ မေ ၉ ၊ ရန်ကုန်ဟင်္သာမီဒီယာ
Health News May 5, 2020
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ပေါ်လာတာကတော့ ကူးစက်ခံထားရတဲ့...
အင်ဒိုနီးရှားတွင် COVID-19 ကြောင့် တရက်အတွင်း လူ ၁၄ ဦးသေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကောင်၌ သေနတ်ဖြင့်ပစ်ရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
ဘာလီမှ ရာနှင့်ချီသောဝက်များသေဆုံးမှုကို အင်ဒိုနီးရှား စုံစမ်းစစ်ဆေး
ဝူဟမ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဟူဘေးဆေးရုံမှ ဆရာဝန်တစ်ဦး သေဆုံး
ဝူဟမ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၃ ဦးရှိ​ပြီဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူအစိုးရအတည်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဝူဟမ်ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု လူ ၈၀၀ ကျော် ကူးစက်ခံရပြီး သေဆုံးသူ ၂၅ ဦး အထိရှိလာ
ထိုင်းအသင်း နည်းပြ ထုတ်ပယ်ခံရ
ထိုင်းအသင်းဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ၂၀၁၉ အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပြီး အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတင်...
လီဗာပူးလ်အတွက် သွင်းဂိုး ၅၀ အပြည့်မှာ ချောကလက် လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ ဆာလက်
အောက်တိုဘာ ၂၅ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက်ဆာလက်ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် သူ့ရဲ့သွင်းဂိုး ၅၀...
မိုဗစ်ရဲ့ဂျာစီများ မေဂျာလိဂ်မှာ ရောင်းအားသွက်
အောက်တိုဘာ ၂၃ မေဂျာလိဂ်ကလပ် အယ်လ်အေဂလက်စီအသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဆွီဒင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဇလာတန်...